E-4C1 ○ Mubhedha unogona kufambiswa mushe kana iyo mbiri yakasimudzwa-inodzoreka padanho rimwe chete uye inogona kukiyiwa yega kana ichinge yatsvedza pane imwecheteyo torodha iyo ine mudziyo wekuchengetedza. ○ Kutungamira castor kuve nechokwadi chekutambanudza chienda pamberi chaipo. Izvo zviviri zvepuratifomu uye njanji dzakasarudzika dzakagadzirwa HDPE zvinhu zvakavezwa kamwe chete ○ Backrest inodzorwa ne hydraulic inobatsira gasi chitubu. ○ Kureba urefu kunoitwa ne crank. ○ Dia.150mm castors ane pakati l ...
E-3C1 ○ Izvo zviviri zvepuratifomu uye njanji yepamhepo zvakagadzirwa neye HDPE zvinhu zvakavezwa kamwechete zvese. ○ Backrest inodzorwa ne hydraulic auxilialy chitubu. ○ Backrest inodzorwa ne hydraulic auxilialy chitubu. ○ Ф150mm ma castors ane yepakati yekuvhara system. ○ Ф150mm ma castors ane yepakati yekuvhara system.
E-8 A1 ○ Iyo huru yepuratifomu yejira inotakurirwa kunze kwenyika mbiri-uye-kudonha hydraulic pombi masisitimu ane yakagadzirwa ne X-ray yakaratidzwa zvinhu. ○ Central kuvhara system uye inotungamira castor inoita kuti choshambadzira chiite zvishoma, zvakavimbika uye zvishoma. ○ Iyo yakatambanudzwa ine mabasa eiyo hi-yakaderera, Trendelenburg uye inodzosera Trendelenburg iyo inodzorwa nemapasiti pamativi maviri ejira. ○ Shure kwechakareba kune iyo yakakosha yekuvhara,
E-8 A2-Standard gadziriso 1.Central brake system: Inoshongedzwa nemabhureki mana ekudzivirira pamativi ese emubhedha anoita mabhureki ari pachinzvimbo chinonyatsoita uye conveninal) .Kushandisa vapoteri vanoperekedzwa nemhando yepamusoro-fani kunoita kuti mabhureki akwanise kuchinjika. uye hupenyu hurefu. 2.Multi-inoshanda chiridzwa rutsigiro: Iyo rutsigiro rwechishandiso inogona kuisa iyo yekutarisisa uye inogona zvakare kushandiswa seyeboardboard kudzivirira netsaona mutserendende kwemurwere. 3.Push Kubata: Kuderedza iyo basa uye preventi ...
E-8 A3-Standard gadziriso 1. Central mabhureki system: Inoshongedzwa nemabhureki mana ekudzivirira pamativi ese emubhedha anoita mabhureki ari pamawere penzvimbo nekunyatso uye nyore.Ukuisa vatengesi vakaperekedzwa nemabheti akakwira-mhando anoita kuti mabhureki ashanduke uye hupenyu hurefu. 2.Multi-inoshanda chiridzwa rutsigiro: Iyo rutsigiro rwechishandiso inogona kuisa iyo yekutarisisa uye inogona zvakare kushandiswa seyeboardboard kudzivirira netsaona mutserendende kwemurwere. 3.Push Kubata: Kuderedza iyo basa uye kudzivirira ...